Brake & Clutch Isilinda
Itshintsha nini iklatshi yesandla? Kuya kufuneka sinikele ingqalelo kwezi zinto zintathu
Ixesha Post: Jan-18-2021
Ipleyiti yokuhambisa yokuhambisa iklatshi yeyakho kwizinto ezisetyenziswayo. Ngokusetyenziswa kweemoto, ipleyiti yokubamba iya kunxiba kancinci. Xa ukunxiba kufikelela kwinqanaba elithile, kufuneka kutshintshwe. Sazi njani ukuba isitya sokubamba kufuneka sitshintshwe? Ngokwamava adlulileyo, ndicinga ukuba ...Funda ngokugqithisileyo »
Intengiso ye-flash iyafumaneka ngoku ngaphandle kwe-MOQ!
Ixesha Post: Aug-21-2020
Lo nyaka ubenzima kakhulu kuthi sonke ngenxa yentsholongwane ye-corona virus. Siyathemba ukuba singasebenzisana ukuze siphile kwaye sonwabe. Silungiselele isitokhwe esikhulu e-China nase-Dubai zokugcina kwakho. Ukuba ungathanda ukujonga ixabiso lezinye izinto, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Uqhagamshelwano: +86 1887580 ...Funda ngokugqithisileyo »
Inkonzo yokumisa ngokuthumela ngokudibeneyo
Ixesha Post: Jun-30-2020
1. 1 iqhekeza MOQ, iiyure ezingama-24 Ukuhanjiswa. 2. Iivenkile ezithengisa ngokuthe ngqo eDubai naseGuangzhou 3. Ukufumaneka kwesitokhwe esikhulu 4. Gcwalisa imveliso enzulu ngaphezu kweekhowudi ezingama-7000 + ezahlukeneyo 5. Ukudityaniswa kwabavelisi abasi-8 ngaphezulu kweminyaka eli-10 kwimvelisoFunda ngokugqithisileyo »
Bhalisela iincwadana zethu
Idilesi: Igumbi 1901, enye yeNkcubeko Plaza, No. 1349 Liyuan North Road, Haishu, District, Ningbo, Zhejiang, China
Umnxeba: +86 574 87628775
Ifeksi: +86 574 87628770